नेयमारविनै ब्राजिलको ७ गोल !
नेयमारविनै ब्राजिलको ७ गोल !
२०७६ जेठ २७ सोमबार १०:२३:००
अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपुर्ण खेलमा ब्राजिलले होन्डुरसमाथि शानदार जित हात पारेको छ । पोर्टाे एलेग्रीमा आइतबार राति भएको खेलमा घरेलु टोली ब्राजिलले १० खेलाडीमा समेटिएको होन्डुरसलाई ७–० को भारी अन्तरले पराजित गरेको हो । घुँडाको चोटका कारण आराममा रहेका नेइमारविनै ब्राजीलले शसक्त प्रदर्शन गरेको थियो ।
ब्राजीलको शानदार र फराकिलो जितमा गाब्रियल जेससले छैटौं र ४७औं मिनेटमा दुई गोल गरे । थिएगो सिल्भाले १३औं, पेनाल्टी मार्फत फिलिप कोउटन्होले ३७औं, डेभिड नेरेसल ५६औं, रोबर्टाे फिर्मिनोले ६५औं र रिचालीसनले ७०औं मिनेटमा गोल गरेका थिए ।
२९औं मिनेटमा रोमेल कुइओटो रातो कार्ड खादै मैदानबाट बाहिरिएपछि होन्डुरस १० खेलाडीमा समेटिएको थियो । सुरुवातदेखि नै आक्रमक खेल खेलेको ब्राजिलले खेलको छैटौं मिनेटमा जेससको गोलबाट अग्रता बनाएको थियो ।
एक सातअघि खेलिएको खेलमा ब्राजीलले कतारलाई २–० गोलले हराएको थियो । सोही खेलमा नेइमारको घुँडाको चोट बल्झिएको थियो । नेइमार अझै चार साता खेल्न नसक्ने बताईएको छ । ब्राजिल घरेलु मैदानमा आयोजना हुने कोपा अमेरिका कपको तयारीमा छ । ब्राजिल रहेको समूह ‘ए’ मा बोलिभिया, भेनेजुएला र पेरु रहेका छन् । ब्राजिलले १५ जुनमा बोलिभियासँग खेल्दै कोपा अमेरिका कपको शुरुवात गर्दैछ । होन्डुरस कोन्काकाफ गोल्डकपको तयारीमा छ ।